प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको यो ३ मीनेटको भीडीयो जुन एकाएक चर्चीत भयो ( हेर्नुहोस भीडीयो ) - Kailash Post
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सोमबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरूद्धका सबै विरोध र टीकाटिप्पणीलाई सहँदै आएको तर पार्टीमाथि धावा बोल्ने काम भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भयोे भने ‘ठिक लगाउने’ चेतावनी दिए। उनले भने, ‘पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो भने। बघिनी तबसम्म चुप हुन्छ जबसम्म डमरुमाथि खतरा हुँदैन। पार्टीमाथि धावा बोल्नुभयो भने ठिक लगाइने छ। बोलिरहनुभएको छ तर म सीमा हेरिहेको छु। तपाईंहरूलाई मात्रै निष्कासन गर्न होइन हामीलाई पनि निष्कासन गर्न आउँछ भन्ने सम्झना राख्नुहोस्।’
उनले नेपाल समूहले आफूलाई गरेको कारबाही ‘किर्नाले भैंसी खाए‘ जस्तो भएको भनी व्यंग्य गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेकाले आफूले राजीनामा नदिने उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिए।
उनले आफूलाई कसैको समर्थन नचाहिएको भन्दै फिर्ता लैजान भने।
उनले भने, ‘प्यादाले मन्त्री खान्छ चेसमा। ‘
‘ भुसुनाले लामखुट्टेले हात्ती खान्छ। उपियाँले मान्छे खान्छ। कति खान्छ ? तिनीहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो। उपियाँले मान्छे खाएजस्तो। किर्नाले भैंसी खाँदैन। ‘
किर्नाले भैंसी खाएको देख्नुभएको छ कि छैन? यिनीहरूले गरेको हामीलाई कारबाही त्यस्तै हो। किर्नाले भैंसी खाएजस्तै। किर्नाले भैंसी खाने ? मनको यिनको रहर हो। तर किर्ना किर्नाकै ठाउँमा हुन्छ। भैंसी भैंसीकै ठाउँमा हुन्छ। सन्तोष गर्न पाइन्छ किर्नाले भैंसी खाएकै हो। भैंसी खायो खायो खायो पुटुक्क भयो किर्नु फुत्रुक्क झ्रयो। मजाले भैसी खायो, पुटुक्क भयो , फुत्रुक्क झर्‍यो।’
कति रोएका ? राजीनामा देऊ राजीनामा देऊ। हटाउन। हटाऊ ! समर्थन किन गरिरहन्छौ ? फिर्ता लैजाऊ। केही पनि गर्न नसक्ने राजीनामा देऊ, राजीनामा देऊ । मसँग बहुमत छ। बहुमतको सरकार छ। म किन राजीनामा दिन्छु ? बहुमतबाट हटाउन मन छ भने फिर्ता लिऊ। लैजाऊ। चाहिएको छैन तिम्रो समर्थन। लैजाऊ।’
राजीनामा दिन्न , समर्थन फीर्ता लैजाउ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग संसदमा बहुमत रहेकाले राजीनामा नदिने बटमलाइन सुनाउनु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले राजीनामाको माग गरिरहेकोतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन मन भए समर्थन फिर्ता लिन चुनौतीसमेत दिनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत हुँदाहुँदै किन राजीनामा दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘मसँग बहुमत छ, किन राजीनामा दिने ? बहुमतबाट हटाउन मन छ भने फिर्ता लेऊ । ‘
‘चाहिएको छैन मलाई तिम्रो समर्थन, फिर्ता लैजाऊ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध अनेकन षडयन्त्र गरिरहे पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले यही बिषयमा आफ्नो प्रष्ट बटमलाइन सुनाउनु भएको हो ।
आफू समर्थन फिर्ता लिएर केही गर्न नसक्ने तर राजीनामा माग्ने प्रचण्डको शैली हरुवा अभिव्यक्ति भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीको समर्थन आफूलाई नचाहिएको बताउनु भयो । उहाँले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड समर्थन फिर्ता नलिई कांग्रेस र जसपा गुहार्दै हिँडेको र एमालेको माधव नेपाल पक्षले साथ दिइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘यस्ता धाक धक्कुसँग डराइन्न ।’
उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको भन्दै संसदले काम गर्न नसक्ने आफ्नो पुरानै निश्कर्ष पनि दोहोर्याउनु भयो । अदालतको फैसला आफूहरूले माने पनि यो संसदबाट पार नलाग्ने र नयाँ सरकार पनि बन्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस नेताहरू पनि संसद विघटनको विकल्प छैन भनेर चुनावको पक्षमा उभिएको तर माओवादी र माधव नेपालहरू भने चुनावबाट भागिरहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अरु के के भने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने नक्कली तत्वहरु सल्बलाइरहेको बताउनुभएको छ । कम्युनिष्ट विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरुलाई सफल हुन नदिइने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताउनुभएकाे हाे पार्टी फोड्न एकथरी तत्वहरु लागि परे पनि आफूलाई केही फरक नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पर्ने उद्देश्यका साथ ती तत्वहरु लागेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
“मलाई निकाले, ईश्वर पोखरेललाई निकाले, अरु साथीहरुलाई पनि निकाले तर हामीले त कसैलाई निकालेका छैनौं” उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशमा पनि सदस्यहरु निकाल्ने काम माधव पक्षले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“धित मरुन्जेल नेता कार्यकर्ता निकाल्नुस्, फेरि यो अवसर प्राप्त हुँदैन” उहाँले भन्नुभयो । लोकतान्त्रिक प्रणालीको माला जपेर असफल पार्ने केही तत्वहरु लागिपरेको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संघीयताको नारा जपेर नथाक्ने तर त्यसलाई असफल बनाउनेतिर लाग्नेहरु अहिले देखिएका छन् ।”
अपवित्र गठबन्धन गरेर अग्रगमनलाई ढाल्ने, अस्थिरता कायम गर्न केही शक्ति उद्यत रहेको उहाँले बताउनुभयो । “द्वेष फैलाउने, घृणा फैलाउने, फाटो बढाउने, अनेकता मच्चाउने मात्र काम भइरहेको छ” प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, “देशमा वितण्डा मच्चाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यो हामीले देखेकै हो ।”
वामपन्थी शक्तिलाई एकजुट बनाउन आफूले हर प्रयास गरे पनि त्यसलाई असफल बनाउने काम भएको बताउनुभयो ।मलाई नै पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकाल्ने काम भयो तपाईंहरुले देख्नुभयो नि उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
केही पनि गर्न नसक्नेहरु आफ्नो राजीनामा मागिरहेको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “मसँग बहुमत छ, किन राजिनामा दिनु ? सक्नुहुन्छ भने समर्थन फिर्ता लैजानुस् ।
” चुनावमा टिकट दिन्छु भनेर पार्टी फुटाउन खोजेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “अवको चुनावमा माधवकुमार नेपाल आफैँ सांसद बन्न सक्नुहुन्न, अरुलाई के बनाउनुहुन्छ ? टिकट त बसपार्कमा जति पनि छ नि ।” गल्ती महसुस गरेर आएमा पार्टीमा काम गर्ने वातावरण बनाउने उहाँले बताउनुभयो । तर गुटगत काम गर्ने छुट अब पार्टीमा कसैलाई नदिइने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
जनतातिर फर्केर गल्ती गरेको आत्मालोचना गरेमा नेता नेपाललाई माफी दिइने उहाँले बताउनुभयो ।“सहने योटा हद हुन्छ, मेरो विरुद्धको सबै आरोप सहन्छु तर पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो भने सहिन्न, पार्टीमाथि धावा बोल्नुभयो भने ठेगान लगाइनेछ ।” उत्पीडन विरुद्धको आन्दोलन उपलब्धि पूर्णरुपमा अघि बढेको र अझै सचेत प्रयास जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरुका साथ अगाडि बढेर जातीय उत्पीडन अन्त्य गर्नेछौं प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव, उत्पीडनको अन्त्यलाई सफलतापूर्वक अघि बढाएका छौं, अझै बढाउँदै जानेछौं ।” यस आन्दोलनलाई असफल बनाउन विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु लागेको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेका कुरा
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विधि र प्रक्रियामा आएर सरकार ढाल्न चुनौति दिनुभयो । “तपाईंहरुले दिएको समर्थन औपचारिक रुपले संसदीय प्रक्रियाअनुसार फिर्ता लिनुस् कोही बात छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदबाट विश्वासको मत लिनुहुन्छ ।
विश्वास पाए सरकारमा रहनुहोला, नपाए राजीनामा दिनुहोला ।” राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाल देश गरिब हुनै नपर्ने देश गरिब भएको चर्चा गर्नुभयो ।